University of Nantes - Ọmụmụ na France. Education na Europe
University of Nantes Nkọwa
tọrọ ntọala : 1460
Students (ihe ruru.) : 35000
Echefukwala atụle University of Nantes
Idebanye aha na University of Nantes
University of Nantes akwụsịbeghị-aga n'ihu. Ke akpatre 50 afọ, Université de Nantes emewo ọzụzụ na nnyocha ndị kasị elu larịị. Ihu a-agbanwe ngwa ngwa ụwa, Université de Nantes invents a ọhụrụ nlereanya nke mahadum. Nlereanya a nsị na-amụrụ n'oge ya a center na, karịa mgbe ọ bụla, ndị mmadụ na obi ya ambitions. Gbanyere mkpọrọgwụ Nantes – a obodo na-ede ude vitality, omenala, mmepe na àgwà nke ndụ – Université de Nantes ọchị na-ekele ya 2 campuses na Saint- Nazaire na La-Roche-sur-Yon.
na 34,000 ụmụ akwụkwọ (na nsonye 3,750 mba ọzọ ụmụ akwụkwọ) na 4,250 mkpara, 50% nke bụ raara onwe ya nye ka nnyocha, 1 si 12 Nantes bi na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ na University of Nantes. ezi omenala, sports na otu ntinye aka, anyị universtity na-agbakwa ume ka revitalization nke ya region site ọgaranya ọha arụmụka na site na-akpali akpali creativity : nzukọ, ruo ụbọchị media ngwá, artists-in-obibi mmemme, elu-larịị sports, -amụrụ nkwa site 150 -amụrụ òtù.
N'ime ya campuses, dị iche iche ọzụzụ izute jupụta ibe. Université de Nantes bụ otu n'ime obere French mahadum iji na-akwalite interdisciplinarity. n'ime 21 n'ahụ na ụlọ akwụkwọ, 295 specialties na-anọchi anya na 63 laboratories na-arụ ọrụ na niile ubi nke ihe ọmụma. 75% n'ime ha bụ A na A + gosiri.
Université de Nantes enwe mmasị na isi akụ dị mkpa iji gbaa obodo, mba na mba imekọ ihe ọnụ na-eme ka interdisciplinary a na-akpata nke ọhụrụ na ihe ịga nke ọma. Ọ na-eme ka ọhụrụ nke socioeconomic anam-elu ekele ya na-eme nnyocha, laboratories, ngwá na ala-nke na-art nkà na ụzụ nyiwe. Ọzọkwa, -adịbeghị anya akwụkwọ na mahadum (8,000 kwa afọ) -emekwa a ezigbo ọdọ mmiri nke nkà na talent. Site itinye aka na mpaghara mbipụta mgbe idebe mba n'ọnọdụ, Université de Nantes na-egosi ya ike iji na-arụ ọrụ na ọhụrụ akpịrịkpa nke ókèala. Nke a dị oké mkpa ka ọ bụla development.
33,534 ụmụ akwụkwọ na mbụ ọzụzụ
4,047 ndị ọrụ ọkachamara na-eme nnyocha, administrative, ọrụaka ma n'ọbá akwụkwọ mkpara.
295 diplọma dabeere na European nlereanya (Bachelor-ukwu-doctorate)
80 curricula na a ọkachamara nsuko
31 a gbasaa akwụkwọ mmụta
8 engineering diplọma
111 mahadum degrees
21 agụmakwụkwọ ngalaba
11 n'ahụ na ọzụzụ na nnyocha nkeji (UFR)
1 engineering akwụkwọ
1 Observatory nke Earth na mbara sayensị
1 doctoral mahadum na 8 doctoral akwụkwọ
63 research owuwu
Department of History, Art History na Achaeology
Department of Humanties na Asụsụ
Department of Foreign asụsụ na omenala
Department of Science and Technology nke Physical Ihe na Sports (ntụpụ ụkwụ)
Institute of Geography na Regional Planning nke Université de Nantes (IGARUN)
Institute of Economics na Management – Institute of Business Administration (IEMN-IAE)
Institute for Research na Education na French dị ka a Foreigh Language (IRFFLE)
Onye Ozizi ọzụzụ akwụkwọ (ESPE)
Institute of Nkwadebe maka General Administration (IPAG)
University Institute of Technology (IUT) nke Nantes
University Institute of Technology (IUT) nke Saint-Nazaire
University Institute of Technology (IUT) nke La Roche-sur-Yon
The ugbu a University e hiwere na 1970 n'okpuru okwu nke 1968 iwu nke gbanwee French agụmakwụkwọ ka elu. Nke a guzobere ọhụrụ alụmdi dochie mbụ University of Nantes nke a tọrọ ntọala ná mmalite 1960. Nke a n'onwe ya a re-oruru nke mbụ University of Nantes bụ nke e guzobere site popu na 1460 ma kagburu n'oge French mgbanwe.
The mahadum nke Brittany na-chọtara Bertrand Milon on April 4, 1460, na ụzọ nke Duke François II of Brittany n'okpuru ụdị a popu nke Pope achịcha II nyere Sienne. Nke a dunyere chọrọ nke François II utịm onwe kwupụta French eze, mgbe nso duchy na Angers na 1432, Poitier na 1432 na Bordeaux na 1441, ụfọdụ mahadum na-kere. Hụrụ n'okpuru Ọdịdị nke a studium generale, a mahadum nwere ike ịkụziri niile omenala ọzụzụ: Arts, Theology, Iwu na Medecin. The ọgụgụ ụmụ akwụkwọ n'etiti ọgwụgwụ nke narị afọ nke 15 na n'oge abụọ na-esonụ na narị afọ iru a puku ma ọ bụ 1500, dị ka ndị kasị elu atụmatụ.
The mgbalị mbụ ịkwaga mahadum Nantes na Rennes-ewe ebe mgbe ọgwụgwụ nke narị afọ nke 16. French eze, Henry IV chọrọ ahụhụ Nantes, a ligueuse Ville wụsa ya nkwado nke Duke nke Mercoeur. The mahadum na-enweta ihe iji si eze site a akwụkwọ ozi nke August 8, 1589 ka mouve ka Rennes, a obodo na-anọgide-eguzosi ike n'ihe onyeeze. Alụmdi na-Otú ọ dị bụghị kpaliri n'ihi ego nke. A ọhụrụ akwụkwọ ozi nke September 5, 1591 eze ndi iji nke nyefe, ma ọzọ na-enweghị ngwa. on April 1598, a ikpeazụ eze ozi akawanye ọnọdụ ahụ site ikwado oruru nke mahadum Nantes.
Ị chọrọ atụle University of Nantes ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Nantes na Map
photos: University of Nantes ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Nantes.